မဒေါင်းလုပ် Kingdom Wars မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Kingdom Wars
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (47.00 MB)
မဒေါင်းလုပ် Kingdom Wars,
Kingdom Wars သည် အခမဲ့ကစားနိုင်သော အွန်လိုင်းအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုပါရှိသော သက်ရှိအွန်လိုင်းကမ္ဘာတစ်ခုနှင့်အတူ မွန်းမံမှု၏စိတ်ကူးယဉ်- Kingdom Wars ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော မြို့များနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ် ရဲတိုက်များကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်ပါယာတစ်ခုဖန်တီးရန် ဂိမ်းထဲတွင် မစ်ရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ ဤမွန်မြတ်သောမစ်ရှင်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မလိုလားအပ်သော သူခိုးသူပုန်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကို အဆက်မပြတ်အသက်ရှူနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးစားကြသည်။ ဂိမ်း၏ အခြေခံအကျဆုံးအချက်မှာ ကမ္ဘာကြီးသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဗျူဟာဂိမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဂိမ်းမှထွက်လျှင်ပင် အရာအားလုံးသည် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီး သင်တည်ထောင်ထားသော အင်ပါယာရှိလူများသည် ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါသည်။
Kingdom Wars ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဂရပ်ဖစ်နှင့် စက်ပြင်များဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဂိမ်းအတွင်းရှိ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ခံယူချက်ကို ဖမ်းယူရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ သင်ကြုံတွေ့ရမည့် စစ်ပွဲများတွင်၊ ဝိုင်းရံစစ်ပွဲများနှင့် မြို့ကိုကာကွယ်ရန် စစ်မှန်သောအသက်ရှင်ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် သင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်ကင်ပိန်းမုဒ်အပြင်၊ ဂိမ်းတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သင်တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် ရဲတိုက်တိုက်ပွဲများ သို့မဟုတ် ဝိုင်းထားသည့်မုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် ရဲတိုက်ကို ဝိုင်းရံထားသကဲ့သို့ ခံစားရသောအခါ၊ သင်သည် စနစ်တစ်ခုကို လျင်မြန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အလုပ်၏ ဗျူဟာအပိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
Kingdom Wars တွင် မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှု သုံးခုရှိသည်- elves၊ orcs နှင့် humans။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့တစ်ခုချင်းစီကပေးတဲ့ gameplay mechanics နဲ့ အားသာချက်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင်၏ရဲတိုက်များ၊ ဝိုင်းရံခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လူများကပေးသော အခွင့်အလမ်းများအားလုံးသည် သင်ရွေးချယ်သည့်ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လူမျိုးတစ်မျိုးစီ၏ ဘာသာစကား၊ ဇာတ်လမ်းနှင့် နယ်ပယ်တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲပြားသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ တည်ဆောက်မှုပုံစံ အပြောင်းအလဲသည် Kingdom Wars တွင် အသက်ဝင်စေမည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကျသော ရာသီဥတုအခြေအနေများသည် ဂိမ်းအတွင်းစစ်ပွဲ၏အခိုက်အတန့်ကို ထိခိုက်စေသည့် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုအဖြစ် သင်တည်ဆောက်ထားသော လူ့ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နွေရာသီ သို့မဟုတ် ဆောင်းရာသီတွင်၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း သို့မဟုတ် နှင်းမုန်တိုင်းများတွင် သင့်စစ်တပ်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး သင်၏ဗျူဟာကို မှန်ကန်စွာ မစီစဉ်ပါက၊ သင်သည် ကြီးမားသောအားနည်းချက်နှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ ဤအတွက်၊ သင်သည် သင့်တော်သောအချိန်ကို စောင့်ပြီး သင်၏စစ်တပ်အတွက် ရာသီဥတုကို ဆင်ခြင်သင့်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများသည် အချို့ယူနစ်များကို လုံးဝပိတ်နိုင်သောကြောင့် သင့်အား လုံးလုံးလျားလျား အကာအကွယ်မရှိစေပါ။
Kingdom Wars သည် ၎င်း၏ကစားသမားများအတွက် မျှဝေထားသော အကြံပြုထားသော စနစ်အင်္ဂါရပ်များကို ကြည့်ကြပါစို့။
RAM က 6GB ဖြစ်ပါတယ်။
10GB အခမဲ့ သိုလှောင်မှု
Kingdom Wars သည် ဗျူဟာချစ်သူအားလုံးကို ၎င်း၏ ရင့်ကျက်သော ခန္ဓာကိုယ်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဤအသက်ဝင်သောကမ္ဘာသို့ ခြေလှမ်းချင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကိုရွေးချယ်ပြီး သင်၏မြေယာများကို ချက်ချင်းစတင်တည်ဆောက်ပါ။
Steam အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့် ဂိမ်းများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။
Kingdom Wars မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 47.00 MB
တီထွင်သူ: Reverie World Studios
BATTLESHIP APOLLO သည်ဧရာမအာကာသယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးတိုက်လေယာဉ်များအကြားကြီးမား။...
SMITE သည်ဂိမ်းကစားသူများကို MOBA အမျိုးအစားဂိမ်းကိုပေးသည်။ Dota မှစတင်ခဲ့သော MOBA အမျိုးအစားသည် LOL...
Anno 1800 ကိုနည်းဗျူဟာဂိမ်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ Anno 1800...
Age Of Empires2သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြိုကျနေသောရောမမြို့နှင့်အတူစစ်ပွဲများသို့ ၀...
Clash of Irons သည် real-time tank ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခန်းကဏ္ game မှပါ ၀ င်သောဂိမ်းနှင့်ဘဝ...
Crusader Kings3သည် Paradox Development Studio မှတီထွင်ထားသောဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Crusader...
Crash of Magic သည် Windows 10 ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည့် click-based 3D fantasy...
Warhammer 40,000: Battlesector သည်အမြန်ဆုံးနှုန်းဖြင့်အလှည့်အခြေပြုမဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပြီး ၄၁...
Age of Empires 3: Definitive Edition သည်တူရကီတွင် PC...
Tropico6သည် အာဏာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်လိုလျှင် ပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်သော...
Minecraft သည် သင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ ကစားနိုင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်ဘဲ အခမဲ့ကစားနိုင်သော pixel...
Starcraft2သည် 90 နှောင်းပိုင်းများတွင် Blizzard မှထွက်ရှိခဲ့သော ဂန္တဝင်ဗျူဟာဂိမ်း Starcraft...
Halo Wars2သည် Windows 10 PC နှင့် Xbox One ကွန်ဆိုးလ်တွင် ကစားနိုင်သော အချိန်နှင့်တပြေးညီ...
Evil Bank Manager သည် Steam တွင်လွှင့်တင်ပြီး Windows...
Lords Mobile သည် မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းပြီးနောက် desktop ပေါ်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည့် အလွန်ရေပန်းစားသော...
Pixel Worlds သည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်၏ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြလိုပါက သင့်အား ပျော်စရာများစွာ...
Age of Empires IV သည် အရောင်းရဆုံးအချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗျူဟာဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Age of...
FreeCol သည် အလှည့်ကျနည်းဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ FreeCol သည် ယခင်က Colonization ဟုလူသိများပြီး...
အလယ်ခေတ်ပုံစံ MMO ဂိမ်း Imperia Online သည် ကစားသမားများအား အင်ပါယာတစ်ခုဖြစ်လာရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန်...
New Star Soccer5သည် သင်အွန်လိုင်းတွင်ကစားနိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြယ်ပွင့်ဘောလုံးကစားသမားကို...
နည်းဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဂိမ်းချစ်သူများစွာအတွက် သတိရလာမည့် ပထမဆုံးဂိမ်းတစ်ခုမှာ Age of Empires...
SpellForce သည် မတူညီသော ဂိမ်းအမျိုးအစား3ခုကို ပေါင်းစပ်ကာ ကစားသမားများအား...
Warfare Online သည် ဗျူဟာဂိမ်းများနှင့် ကတ်ဂိမ်းများ ရောနှောပါဝင်သည့်...
Kingdom Wars သည် အခမဲ့ကစားနိုင်သော အွန်လိုင်းအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုပါရှိသော...